SSAW Pipe / Spiral intsimbi imfumba umbhobho / iimfumba Tubular
Imibhobho yesinyithi e-welding yimibhobho yentsimbi eyenziwe ngeepleyiti zentsimbi okanye imicu ekroliweyo kunye ne-welding, kwaye ngokubanzi ziimitha ezi-6 ubude. Inkqubo imveliso umbhobho ngentsimbi welding ilula, ukusebenza yemveliso iphezulu, iindidi kunye nokubalulwa zininzi, izixhobo mali
Isitya esikhokelayo kufuneka sibe yi-4 ukuya kwi-5 mm ubukhulu ukukhusela kwimitha. Eyona nto iphambili kwipleyiti yokukhokela kukukhokela, umlinganiso wayo unzima, uxinano luphezulu
Yesicelo: Ukusetyenziswa kwesikwere sokwakha umbhobho, ukuvelisa oomatshini, iiprojekthi zokwakha intsimbi, ukwakha iinqanawa, ubunjineli bombane, imoto isisu semoto, izikhululo zeenqwelo moya, iindlela zikaloliwe, ulwakhiwo lwezindlu.
Umbhobho wesinyithi ongenasiphelo luhlobo lwentsimbi ejikelezayo / yentsimbi, umbhobho wesinyithi ongenasici uhlukaniswe ngombhobho wensimbi ongenamthungo kunye nentsimbi yentsimbi esetyenzisiweyo. Esetyenziswa kakhulu kwipetroleum, kwimizi-mveliso yamachiza, unyango lwezamayeza, ukutya, ishishini elikhanyayo, isixhobo soomatshini